Ngenela imidlalo ka-Ward 34 | News24
Ngenela imidlalo ka-Ward 34
ABAQGUQGUZELI bemidlalo yomphakathi yaminyaka yonke ku-Ward 34, baxwayisa amaqembu avela ngaphandle ukuba eqaphele engashiywa isikhathi sokungenela imidlalo ezoba ngo mhla ka-17 no mhla ka-18 kuNdasa (March), esikoleni i-Panorama.
Umsunguli walemidlalo noyintatheli eyaziwayo nesimnkatsha uMnuz Jerry Barnes uthi yize lemidlalo yaqalwa njengemidlalo ka-Ward 34 eminyakeni eminingi edlule, amanye amaqembu avela ngaphandle amukelekile.
“Akukholakali ukuthi lemidlalo ngayiqala ngamaqembu amabili nenkomishi eyodwa eminyakeni engaphezulu kweyi-15 edlule endaweni yase-Panorama nase-Eastwood. Into eyangenza ukuthi ngifune ukuqala lemidlalo ingoba ngangihlushwa ukubona intsha iwuvanzi ngamaholide ingenayo into eyenzayo. Lemidlalo isikhulile manje.
“Engikulwelayo wukuthi ngifuna ukubona umphakathi , ikakhulukazi intsha idlala ngokukhululeka,”kusho uBarnes.
Lemidlalo izoqala nge-Community Fun Run/Walk Mile nalapho wonke amalungu omphakathi, eqguqguzelwa khona ukuba bebambe iqhaza.
“Sithi kuwonkewonke, woza uzogijima noma uzihambele nje bese uthola imedali (medal).”
Yize kule midlalo kuvamise ukudlwa ibhola lezinyawo, kulo nyaka kuzoba kudlalwa nebhola lomnqakiswano (netball).
Abafana abadlalela u-U15 nama siniya (open team) bazobe bedelisana enkundleni , kanti nobaba bendawo (over 35) bayothola ithuba lokunandisa ngalolusuku.
uBarnes uthe: “Ngiyanxusa ukuthi amaqembu axhumane nami ukuze ethole imininingwane ebalulekile .”
Abafisa ukuba yingxenye yale midlalo bengaxhumana noJerry Barnes enombolweni ethi: 083 521 9553.